Tikidhada Jaban ee CFL iyo Qiimaha Safarka | Save A tareenka
Tikidhada Jaban ee CFL iyo Qiimaha Safarka
Guriga > Tikidhada Jaban ee CFL iyo Qiimaha Safarka
Halkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Tikidhada raqiiska ah ee CFL iyo Qiimaha safarka CFL iyo faa iidooyinka.
mawduucyada: 1. CFL by Tilmaamaha Tareenka
2. Ku saabsan CFL 3. Aragti Sare Si Loo Helo Tigidhka Tareenka Jaban ee CFL
4. Immisa ayey ku kacaysaa tikidhada CFL 5. Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay isticmaalka tareenada CFL, oo aan lagu raacin diyaaradda
6. Maxay ku kala duwan yihiin waqtiga Gaaban, iyo Tigidhada Maalinta ee CFL 7. Ma jiraa rukun CFL ah
8. Intee in le'eg ka hor bixitaanka CFL waxaan u baahanahay inaan imaado 9. Waa maxay jadwalka tareenka CFL
10. Saldhigyadee ay u adeegto CFL 11. CFL FAQ
CFL by Tilmaamaha Tareenka
Iyada oo leh saacad aad u sareysa 96%, CFL (Shirkadda tareenka rasmiga ah ee Luxembourg) waa mid kamid ah wadooyinka tareenka ee loogu kalsoonaan karo Yurub.
Sanadkasta, CFL way qaadataa 25 milyan oo qof iyo 105 malaayiin tan oo badeecooyin ah oo u gudbaya meelaha ay ku wajahan yihiin ee ku dhex yaal Luxembourg iyo guud ahaan Yurub.
CFL waa mid saaxiibtinimo u leh deegaanka, Lacag la'aan ah CO2, iyo 100% dhammaan korantadooda waxay ka soo baxaan tamarta dib loo cusbooneysiin karo.
CFL waa bixiyaha adeegga dhaqdhaqaaqa ee ugu weyn Luxembourg.
Ku saabsan CFL
CFL, Bulshada Qaranka ee Tareennada Luxembourg, waa magac kale oo loogu talagalay Tareennada Qaranka ee Luxembourg. Tan iyo markii la aasaasay gudaha 1946, CFL waxay siisay adeegyo dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta Luxembourg.
CFL ayaa bixisa adeegyada tareenka ee gudaha Luxembourg iyo guud ahaan Yurub. Iyada oo leh tigidh sax ah, waxaad booqan kartaa dhammaan kuwa ugu fiican meelaha fasaxa ee Yurub. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo tikidhada ah, CFL waxay dabooleysaa qof walba baahidiisa.
Tareenada CFL waxay tareenada joogtada ah ee tareenka yihiin, Luxembourg – Brussels, Luxembourg – Paris, Ettelbruck – Liege, Wasserbillig– Dusseldorf. Waxaad aadi kartaa wadamada deriska la ah Yurub gudaheeda adoo adeegsanaya tareenada CFL: Faransiiska, Jarmalka, iyo Belgium.
Guud ahaan shirkadda, 3,090 shaqaaluhu waxay ka shaqeeyaan tareenka si ay u hubiyaan in malaayiin rakaab ah ay si nabad ah ku gaaraan goobihii ay u socdeen maalin kasta.
Tag Kaydi Bogaga Tareenka ama u isticmaal aaladdaa 'widget' si aad u raadiso tareenka tikidhada loogu talagalay CFL:
Aragti Sare Si Loo Helo Tigidhka Tareenka Jaban ee CFL
Tirada 1: Sii sii tikidhkaaga CFL-ka ah inta aad awooddo
Qiimaha Tigidhada tareenka CFL wuu kacayaa markay maalinta safarku soo dhowaanayso. Lacag waad keydin kartaa adiga oo jaale tikidhadaada tareenka ee CFL sida ugu macquulsan maalinta safarka (Caadi ahaan 3 bilaha soo socdaa waa ugu badnaan). Boos sii qabsashada hore waxay xaqiijineysaa inaad heshay tikidhada tareenka ee ugu hooseeya CFL. Iyaguna tiro ahaan way xadidan yihiin, markaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u dalbato, ka jaban adiga. Si loo badbaadiyo lacag tigidhada tareenka ee CFL, tikidhada hore u iibso.
Tirada 2: Safarka CFL inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa
Sida hawl wadeen kasta oo tareen, Tigidhada tareenka CFL waa ka raqiisan inta lagu jiro xilliyada ugu sarreeya, bilowga toddobaadka, iyo maalintii. Waad iska hubsan kartaa inaad heleyso tigidhada tareenka ka jaban toddobaad gudihiis. Talaadada, Arbacada, iyo Khamiista, Tigidhada tareenka ee CFL waa kuwa ugu dhaqaalaha badan. Mugga of safarrada ganacsiga shaqada subaxdii iyo galabtii, tigidhada tareenka ayaa ka qaalisan inta badan waqtiyada. Way ka jaban tahay inaad safarto waqti kasta inta u dhaxaysa safarka subaxdii iyo fiidkii. Usbuuc-dhamaadka waa waqti kale oo ugu sarreeya oo loogu talagalay tareennada, gaar ahaan maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Qiimaha tigidhada tareenka CFL sidoo kale way kordhayaan ciidaha dadweynaha iyo ciidaha iskuulka, iyo fasaxyada iskuulada ee Yurub way jiri karaan 3 toddobaadyo markasta.
Tirada 3: Dalbo tikidhadaada CFL marka aad hubto jadwalka safarkaaga
Tareenada CFL ayaa baahi weyn loo qabaa, iyo tartan yar, waxay weli sii ahaanayaan xulashada ugu sareysa tareenada Luxembourg. Waxay awoodi karaan inay dejiyaan xayiraadaha tigidhada tareenka sida midka ay iyagu leeyihiin oo mamnuucaya tigidhada is-weydaarsiga ama soo celinta illaa ay tahay nooca Ganacsiga ee tikidhada tareenka. In kasta oo ay weli jiraan degello internet oo aad tikidhadaada gacan labaad dadka uga iibin karto, CFL ma ogolaanayo iibinta tigidhka gacanta labaad. Sidee tani u caawineysaa inaad lacag dhigato? Dalbo tigidhkaaga marka aad hubto jadwalkaaga inuu kaa badbaadin doono inaad tikidh dalbato laba jeer maxaa yeelay wax baa soo kordhay mana isticmaali kareynin tigidhka asalka ah ee la iibsaday.
Tirada 4: Ka iibso tigidhadaada CFL kaydka tareenka 'Save A train'
Badbaadinta Tareenka ayaa leh kan ugu weyn, ugu fiican, iyo heshiisyada ugu jaban tikidhada tareenka ee Yurub. Xiriirkeena wanaagsan ee aan la leenahay dad badan oo ka shaqeeya tareennada, kuwaas oo ah ilaha tikidhada tareenka, iyo aqoonta aan u leenahay algorithms-ka farsamada ku lug leh, na siiso marin heshiisyada tikidhada tareenka ugu jaban. Kaliya ma bixinno heshiisyada tikidhada tareenka jaban ee CFL oo keliya; waxaan si isku mid ah u siineynaa beddelka kale ee CFL.
Luxembourg ilaa Qiimaha Tareenka Colmar
Qiimaha Luxembourg ilaa Brussels
Antwerp ilaa Qiimaha Tareenka Luxembourg
Qiimaha Metz ilaa Luxembourg
Immisa ayey ku kacaysaa tikidhada CFL?
gaadiidka dadweynaha gudahood ah Grand Douchy ee Luxembourg mar waa bilaash marna maya, waxay kuxirantahay wadada loo maro iyo hadaad muwaadin tahay. Si kastaba ha ahaatee, 1fasalka st ee tareenada CFL, had iyo jeer lacag, laakiin sidoo kale iyagu maahan xulasho qaali ah. Tigidhada tareenka ee CFL waxay ka bilaabmaan € 3 ilaa € 6 hal safar oo tareen ah. The qiimaha tigidhka tareenka CFL Waxay kuxirantahay nooca tigidhada aad iibsato iyo goorta aad dooratid inaad safarto:
Waqti Gaaban . 3
Tigidhka Maalinlaha 6
Jidadka Safarka: Maxay ugu fiicantahay isticmaalka tareenada CFL, oo aan lagu raacin diyaaradda
1) Waxaad had iyo jeer imaaneysaa Xarunta Magaalada. Tani waa mid ka mid faa'iidooyinka tareennada CFL marka la barbar dhigo diyaaradaha. Tareenada CFL iyo dhamaan safarka tareenka kale meel kasta oo magaalada ah illaa bartamaha magaalada ku xigta. Waxay ku badbaadineysaa waqti iyo qiimaha kabista garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada. Iyadoo joogsiga tareenka, way fududaan tahay inaad tagtid meel kasta oo magaalada aad u socoto. Macno malahan halkaad ka timid, Brussels, Nancy, Paris, ama Amsterdam, joogsiga bartamaha magaalada waa faa iidada ugu weyn ee tareenada CFL! Tusaale ahaan, Madaarka Luxembourg waa 20 daqiiqado u jirta bartamaha magaalada.
2) Ku safridda diyaaradaha waxay u baahan tahay inaad joogtid garoonka diyaaradaha ugu yaraan 2 saac ka hor waqtiga duulistaada. Waa inaad maraysaa hubinta amniga kahor intaan laguu oggolaanin inaad fuusho diyaaradda. Tareenada CFL, waa inaad saldhigga joogtaa wax ka yar 30 daqiiqado kahor. Markaad tixgeliso waqtiga ay kugu qaadanayso inaad ka raacdo garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada, waxaad ogaan doontaa in tareenada CFL ay ku wanaagsan yihiin gudaha shuruudaha wadarta waqtiga safarka.
3) Tigidhada tareenka ee CFL way jaban yihiin xitaa haddii aad barbar dhigto tikidhada hawada. Waxaa intaa dheer, markaad isbarbar dhigto dhamaan dacwadaha ku lugta leh, Tigidhada tareenka ee CFL waxay leeyihiin xitaa heshiis qiimo fiican. Iyada oo ay kujirto kharashyo kale sida ajuurada boorsooyinka ee aadan aheeyn inaad ku bixiso tareenka, safraya CFL ayaa ugu fiican.
4) Tareenadu waa jawi saaxiibtinimo. Marka la barbardhigo tareenada iyo diyaaradaha, tareenadu had iyo jeer way ka soo bixi jireen kor. Diyaaradaha ayaa si ba'an u wasakheynaya jawiga iyagoo wata heerar sare oo kaarboon ah oo ay bixiyaan. Tareenka isbarbar dhiga Kaarboon 20x ka yar ka badan diyaaradaha.
Maxay ku kala duwan yihiin Waqtiga Gaaban, iyo Tigidhada Maalinta ee CFL?
CFL waxay leedahay noocyo tikityo kala duwan oo loogu talagalay miisaaniyadaha kala duwan iyo muddada safarada: hadday tahay ganacsi ama firaaqo. Waad hubsan kartaa in mid ka mid ah tikidhadaani ay ku habboonaan doonaan safarkaaga fasalka 1aad ee ku teedsan Luxembourg tareennada qaranka ee CFL..
Tigidhada CFL Gaaban:
Tigidhada waqtiga-gaaban waxay ansax ku tahay fasalka 1aad oo keliya 2 saacadaha laga bilaabo xilliga ansaxinta. Waad ku safri kartaa shabakada tareenka ee CFL iyadoon wax xayiraad ah la saarin laakin tixgalinta waqtiga imaatinka tareenka iyo halka uu ku socdo, sida ku cad jadwalka. Haddii ay tahay inaad ku safarto ogeysiis gaaban, waa inaad heshaa tigidhadan. Kuma koobna oo keliya tareen gaar ah, waxaana laguu oggol yahay inaad doorato xiriirintaada.
CFL Tigidhada Maalinta:
Tikidhada Maalinta CFL waa tikidhada fasalka 1-aad ee muddada dheer, waana ay ansaxayaan laga bilaabo xilliga ay arrintu socoto ilaa 4 waxaan ahay maalinta xigta. Waxaad ka iibsan kartaa tikidka tareenka Maalinta CFL mashiinka tigidhada, xafiiska tigidhada, ama Badbaadinta Tareenka.
Ma jiraa rukun CFL ah?
gaadiidka dadweynaha, oo ay ku jiraan xulashada adeegyada tareenka CFL, gudaha Luxembourg, waa lacag la'aan. Sidaa darteed, looma baahna rukun CFL ah, ilaa aad doorbideyso inaad safartid fasalka 1aad. Muwaadiniinta Luxembourg ee inta badan u safra xadka u gudba Faransiiska, wuxuu ku raaxeysan karaa kaarka fasalka 1aad ee Flexway, waayo, 85 €. Intaa waxaa dheer, Muwaadiniinta Luxembourg waxay ku raaxeysan karaan qiime jaban tikidhada bil kasta ee Jarmalka. Marka meesha aad ka heli karto macluumaad dheeri ah oo tan ku saabsan?
– Tirooyinka tikidhada CFL.
– Taleefanka adeegga macaamiisha CFL 2489 2489
Intee in le'eg ka hor bixitaanka CFL waxaan u baahanahay inaan imaado?
Way adagtahay in si sax ah loogu dhaho kan labaad, laakiin Badbaadinta Tareenka ayaa kugula talinaysa inaad timaadid 30 daqiiqado ka hor waqtiga bixitaankaaga. Iyadoo waqtigan la joogo, sidoo kale waxaad heli doontaa waqti kugu filan oo aad wax kaga iibsato waxyaabaha aad u baahan tahay safarka tareenkaaga sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Waa maxay jadwalka tareenka CFL?
Luxembourg ilaa Qiimaha Tareenka Cologne
Qiimaha Luxembourg ilaa Koblenz
Paris ilaa Qiimaha Tareenka ee Luxembourg
Brussels ilaa Qiimaha Tareenka ee Luxembourg
Saldhigyadee ay u adeegto CFL?
Saldhigga Luxembourg ee CFL wuxuu ku yaal Place de la Gare oo ku taal bartamaha magaalada.
Gudaha Troisvierges, Tareenada CFL tag oo ka soo deg saldhigga Troisvierges oo ku yaal khadka 10, isku xirka magaalada Luxembourg iyo waqooyiga dalka. Troisvierges waxay hoy u tahay laba ka mid ah buuraha ugu dhaadheer Luxembourg.
Tareennada CFL sidoo kale way baxaan waxayna yimaadaan magaalada Nancy ee dalka Faransiiska. Tareennada CFL waxay ka ambabaxaan xarunta dhexe ee Luxembourg una tagaan Nancy kasta 1 saacad.
Waxaad ku ogaan kartaa Flanders ee Belgium tareen safarka ka Luxembourg in Ghent iyo / ama Brussels. Tareenada CFL waxay saacad kasta ka baxaan Luxembourg ilaa magaalooyinka waawayn ee Belgium iyo soo jiidasho leh Old Towns in Europe.
Baaskiil Ma Loo Oggol Yahay Gudiga Tareenada CFL?
Baaskiiladaha waxaa loo oggol yahay tareennada CFL lacag la’aan, iyo ilaa intaad ku keydinaysid meelo loogu talagalay baaskiilada. Waxaad ka heli kartaa baaskiilada keydinta meelaha calaamadda cagaaran ee albaabbada CFL.
Carruurtu Ha Ku Safraan Bilaash Tareennada CFL?
Haa, laakiin kaliya ilaa da'da 12 sano. Carruurta ka yar 12 sano, safri karaan bilaash haddii ay la socdaan qof ka weyn da'da 12, oo wata tigidh ansax ah iyo kaar aqoonsi.
Ma xayawaannada loo oggol yahay Tareennada CFL??
Haa, CFL waxay jeceshahay eeyaha nooc kasta leh iyo kuwaan 4 aadanaha lugta leh waxay si bilaash ah ugu safri karaan tareennada CFL. Eeyadu waa inay ku jiraan hoggaanka loomana oggola inay ku fadhiistaan ​​kuraasta.
Maxay yihiin howlaha loo raaco ee loogu talagalay CFL?
Rakaab kasta waa inuu keenaa tigidh sax ah iyo kaar aqoonsi. Haddii tikidhka tareenkaagu kaa lumo ama aad deg deg tahay, tigidhna horay ugama iibsan, waxaad ku sameyn kartaa tareenka, ka socda wakiilada CFL.
Inta badan Codsashada CFL – Miyay tahay inaan horay u dalbado kursi CFL?
Maya, majiro boos celis oo tareenada CFL ama caalami ah, waxaad fadhiisan doontaa meesha aad leedahay meel bilaash ah, oo waxaad had iyo jeer heli doontaa meel bilaash ah haddii aad horay u iibsatay tigidh tareen.
Ma jiraa internetka Wi-Fi ee tareennada CFL??
Maya. Waad ku raaxeysan kartaa Internet Wi-Fi bilaash ah oo laga helo saldhigyada tareenka ee CFL, laakiin Wi-Fi lagama heli karo tareenada CFL.
Qiimaha Tareenka ee Luxembourg ilaa Ettelbruck
Ettelbruck ilaa Qiimaha Tareenka Junglinster
Qiimaha Mersch ilaa Luxembourg
Clervaux ilaa Qiimaha Tareenka ee Luxembourg
Hadaad akhrido ilaa hada, waad ogtahay dhamaan waxaad ubaahantahay inaad ka ogaato tareenada CFL waxaadna diyaar u tahay inaad iibsato tigidhka tareenkaaga CFL safarkaaga soo socda Save A tareenka.
Ma rabtaa inaad boggaan ku dhigto bartaada? Riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-cfl%2F%0A%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah), Ama si toos ah ayaad ugu xidhiidhi kartaa boggan.